"Uummatni Oromoo godaanaa osoo hin taane Saaqaa ta'u isaan beeka" Barreessaa Charinnat Waaqwayyaa - BBC News Afaan Oromoo
"Uummatni Oromoo godaanaa osoo hin taane Saaqaa ta'u isaan beeka" Barreessaa Charinnat Waaqwayyaa
Kitaabni koo 'Uummatni Oromoo gaanfa Afriikaa saaqaa moo godaanaa' jedhu kitaabilee ani barreesse keessaa yeroo koo isa guddaa natti fudhate dha.
Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti dhaladhee kanin guddadhe yemmuu ta'u dhalootuma koo irraa eegalee waa qorachun jaaladha.
Soorama bahu kootin duras waajjira Aadaaf Tuurizimii godina Wallagga Bahaattis ogeessa qorannoo aadaaf seenaa ta'uun waggoota hedduuf tajaajileera.
Namni waa'ee uummata tokkoo dubbachuu fi waa hojjechuuf dursa uummaticha baruu qaba akkuma jedhamu anis waa'ee uummata Oromoo barreessuuf uummata Oromoo keessatti dhaladhee guddachun dabalataan argaa dhageettii maanguddoota irraa odeeffadheera.
Uumee qubeen dura seenaan argaa dhageettin darba ture. Anis barreeffamoota koof madda kan ta'an maanguddoota dhibba lamatti siiqan walin jiraadhee seenaa argaa dhageettii irraa qayyabadheera.
Ani nama seenaa waanin ta'eef akka ogummaa kootti seenaadhaaf jaalalaaf jibba hin qabu. Akka uummataaf bu'aa buusuttin dhugaa dubbii barreessa.
Kitaabilee ani barreessee keessaa kitaabni 'Uummatni Oromoo gaanfa Afriikaa saaqaa moo godaanaa' jedhus Afaan Oromoo fi afaan Ingliiziin kan barreeffame yemmuu ta'u kitaaba yerookoo isa guddaa fudhate dha.
Kitaabni koo inni biraan mata duree 'Qubee jirenyaa' jedhu qaba. Kitaabni kun immoo kitaaba asoosamaa seenaa dhugaa irratti hundaa'ee barreefame dha. Qabiyyeen isaatis waa'ee buqqaatii uummataati.
Kitaabni koo 'Gadaa Maccaaf Walaabuu Ammayyaa' jedhamu immoo uummatni waa'ee ilmaan Maccaa kudha lamaan sirriitti akka beekufin barreesse.
Sababnisaas gadaan Maccaa dubartoota digdami lama fi dhiirolii digdamii sadin hogganama. Dhiirri inni digdamii sadaffaan noolee (af yaa'ii) gumichaa kan umriinsaa wagga 65 hanga 72 ta'e qofa dha.
Barreeffamni koo mata duree 'Qarree' jedhu qabu fi dhaangii gaa'elaa agarsiisus kitaaba aadaa gaa'elaa of keessatti qabate fi dhiyeenya kana maxxanfame dha.
Kitaabni koo 'Qarree" jedhu dhiyeenya kana maxxanfamullee kitaabileen koo heddu osoo hin maxxanfamin jiru.
Kanaaf sababni inni tokko kitaabilee maxxansuun humna/maallaqa kan gaafatu ta'uu isaati. Inni kan biraa namootni baay'een "siif maxxansina" jedhanii fudhatanii qabiyyee kitaabichaa tokko tokko jijjiiranii maqaa ofiitiin maxxanfachuu isaaniiti.
Kanaafis hojiin ani hojjedhu kun waan dhaloota fayyadu waan ta'eef maxxanfames maxxanfamuu baates abdii kutadhee hin taa'u. Yeroo hundas dhalootaafin hojjedha.
Ani kitaaba asoosamaas ta'ee kitaaba seenaa sababa gahaa malee hin barreessu. Fakkeenyaaf namootni tokko tokko "sirni gadaa maal hojjetaa ture?" jedhanii gaafatu.
Kana ibsuuf immoo waa'ee gadaa sirriitti hin barreeffamne. Kanaafis sirni gadaa sirna bulchiinsa uummata Oromoo caacculee shan qabu akka ta'e barreesseen jira.
Guyyaa guyyaan yoo xiqqaate wantoota haaraa jaha baruu qaba jedhee halkan ka'ee nan dubbisa.